Ingabe ufuna ukubamba iqhaza kwi-World World ezayo? - I-World March
Ingabe ufuna ukubamba iqhaza kwi-World World ezayo?
Ikhaya » Ingabe ufuna ukubamba iqhaza kwi-World World ezayo?
I-World March for Peace and Nonviolence iyizinhlangano zomphakathi ezizoqala uhambo lwesibili ngo-Okthoba 2 2019. I-First World March yabanjwa ngonyaka we-2009 futhi bakwazi ukukhuthaza Mayelana nezenzakalo eziyinkulungwane ezingaphezu kwemidolobha ye-400. Isigameko esikhulu kunazo zonke e-World Second March ofuna ukuphinde ufike futhi unqobe.
I-World March for Peace and Nonviolence ihlelwe yizakhamuzi ezinombono wobuntu, zisakazeke emhlabeni wonke, ngenhloso efanayo yokudala nokwandisa ukuqwashisa ngesidingo semiphakathi yezwe ukuba siphile ngokuthula nokungabi nabuthakathi .
Futhi lokhu kubalulekile ukuthi abahlanganyeli abasha bajoyine lesi sinyathelo esisha. Uma ungomunye wazo futhi ufuna ukusisiza kangcono, sikumema ukuthi upheqa iwebhu, ukufunda izihloko ezihlukile ezikuyo.
Uhlobo luni lokubambisana esikufunayo?
Kusukela ku-World March for Peace and Noviolence, sivulekile kunoma iyiphi inhlangano, inhlangano ebambisene nabo noma ngisho nomuntu ngamunye, kusuka kunoma yikuphi emhlabeni, ofisa ukusebenzisana nathi ukusekela lesi sinyathelo futhi. Njengoba kushiwo ngenhla, umashi uzoqala i-2 ka-Okthoba ye-2019 futhi izohamba emhlabeni wonke, iphele uMashi 8 we-2020.
Ngalesi sinyathelo sokubamba iqhaza sihlose ukuthi abantu noma izinhlangano eziboniswa ngalokhu kuhamba, bahlanganyele kulo mkhosi ngokudala imisebenzi ehambisanayo phakathi nezinsuku lapho uhambo luqhubeka khona.
Yonke imisebenzi kanye nezenzo ezenziwe akuzona izinzuzo, okungukuthi, akukho mkhuthazo wezomnotho, futhi ukubulawa kufanele kusebenze ngokwakho.
Sifuna izinhlangano noma ngabanye abazinikele ekubambeni futhi abafisa ukubamba iqhaza nokudala umugqa wokuxhumana ngokuqondile nabahleli.
Imisebenzi okufanele ithuthukiswe kufanele ikhuthazwe ukuletha inani elanele labantu (izingane noma abadala), okungenani abahlanganyeli be-20 balungile.
Uma ufuna ukubamba iqhaza, kodwa awunawo umqondo womsebenzi othile, sizoxhumana nawe ukusikisela ezinye zezibonelo zalokho okungaqaliswa. Kodwa iziphakamiso zingabuyekezwa futhi ziqokelwe ngokugcwele ngumuntu ophethe isenzo uma nje zikhona ohlelweni lwamanani kaMashi.
Uzocelwa ukuba ukhethe usuku oluphuma I-2 kusukela ngo-Okthoba kusuka ku-2019 kuya ku-8 kusukela ngo-Mashi ka-2020, ukuchaza umsebenzi okhethiwe futhi lokho kungaba yingxenye yemakethe yomhlaba wonke okwenzekayo. Kuye ngosuku esivumelana ngalo, lo msebenzi uzoba yingxenye yemakethe eyinhloko, noma kungaba yingxenye yemakethe yesibili.
Uma usubhalisiwe uzothola i-imeyili ekhelini le-imeyili olichazile, lapho sizoqala khona oxhumana naye sinikeza ulwazi oluthe xaxa, futhi sizama ukuqoqa ulwazi oludingekayo ukuze sifeze umsebenzi ngempumelelo.
Kuhlale kubalulekile ukuba nombhalo wokusekela okubukwayo (izithombe noma amavidiyo), ukuze bakwazi ukwabelwana kuwebhu nakumanethiwekhi omphakathi wenhlangano, ngaleyo ndlela akha irekhodi lalo suku lomlando.
Ungaba yingxenye yenhlangano?
Bonke labo bantu noma izinhlangano ezifisa ukuzibophezela ekwakheni imicimbi emincane noma imisebenzi phakathi nezinsuku lapho umakethe uzohlala khona, kudingeka nje uchofoze le nkinobho yokubamba iqhaza bese ushiya idatha yakho ukuze sikwazi ukuxhumana nawe nge-imeyili, ngakho sizocacisa okudingekayo futhi singaphakamisa imibono ethile mayelana nemisebenzi okufanele yenziwe.
Jabulela uphinde ujoyine lokhu ukunyakaza!
Sishiye idatha yakho yokubamba iqhaza
Ikhutshazwe okwesikhashana kuze kube kuvulwa igiya elisha. Uma unemibuzo ungathinta ku info@theworldmarch.org